बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनी: महान बुद्धको गरिमालाई हलुका नपारौ « Lumbini-Kapilvastu Day Blog
नेपाल रास्ट्र बैंकले निकालेको एक सय रुपियाको नोटमा “लुम्बिनी बुद्धको पबित्र जन्मस्थल” उल्लेख गरेर अशोक स्तम्भको चित्र नोटमा देखाएको छ । लुम्बिनी र बुद्धको स्पस्ट उल्लेख गरेको छ । यो नोट देखनेहरु निकै दंगदास छन् । तथापी यसमा पनि कहीं कतै कमि देखिएको छ । लुम्बिनी कहाँ छ ? उल्लेख छैन । तर्क आउन सक्छ नेपालको नोटमा लेखिएपछि लुम्बिनी पनि नेपालमा त हो नि ? यस्तो कुरा लेखेर अन्य कुनै मुलुकले पनि नोट प्रकाशन गर्न सक्छ । “लुम्बिनी भगवान बुद्धको पबित्र जन्मस्थल” यसमा “लुम्बिनी नेपाल” लेखिएको देखिदैन । नेपाल शब्द राख्न कन्जुसी किन ?
बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन् भन्ने ऐतिहासिक कुरामा भारतीयहरुले बखेडा मच्याएको हुदै होइन । दिग्भ्रम कहाँ छ त ? लुम्बिनी उत्तर भारतमा छ । यो दिग्भ्रम उनीहरुले फैलाएका हुन् । सम्राट अशोकले चार बौद्ध तिर्थस्थलको खोजि गरेर दर्शन पुजन गर्ने अभियानमा बुद्ध जन्मस्थल पत्ता लगाएको इतिहास छ । यो कुरा सबैलाई थाहा छ । सम्राट अशोकले त्यसबेला “हिद बुधे जाते शाक्यमुनी भगवान” अभिलेख सहित शिलास्तम्भ खडा गरेको बुद्ध जन्मस्थल कालान्तरमा फुहर रले पुरातात्विक अनुसन्धान गरि १८९६ दिसम्बर १ मा पुन: पत्ता लगाएर संसारलाई चिनाए । एकसय रुपियाँको नोटमा लुम्बिनीको अशोक स्तम्भ सहित लुम्बिनीको चित्र देखाउनु ठुलो कुरो हो, तर बुद्धको जन्म भारत बर्षको मगध र बैशाली साम्राज्य अन्तर्गतको कपिलबस्तु राज्यको लुम्बिनीमा भएको हो भन्नेहरुलाई कतै बल पुगेको त छैन ? यस्तो दिग्भ्रम फैलाउनेहरुलाई चलखेल गर्ने मौका मिलेको छ ।
लुम्बिनीसंगै नेपाल शब्द राखिदिएको भए सुनमा सुगन्ध हुने थियो । बुद्ध लुम्बिनीमा जन्मिएका हुन् भन्ने कुरामा संसारमा कहीं कतै भ्रम र विवाद छैन, तर लुम्बिनी र कपिलबस्तु कहाँ छ ? नेपालमा कि भारतमा भन्ने कुरामा पर्यटन प्रबर्धन गर्दा भारतीयहरुले स्वार्थबस दिग्भ्रम फैलाएका हुन् । यो कुरा अहिले पुस्टि भएको देखिन्छ ।
नेपालको सद्भावना भ्रमणमा आएकी भारतका बिदेस सचिब सुजाता सिंहले त्रिभुवन अन्तरास्ट्रिय बिमानस्थलमा पत्रकारको जवाफमा बुद्ध नेपालमा नै जन्मिएका हुन् भनि किटानी बयान बाजी किन गर्नु पर्यो ? उनीहरुले बुद्ध जन्मस्थल लुम्बिनीमा गुरुयोजनास्थल भित्र भब्य सास्कृतिक भवन बनाएर चलाएकै छन । महाबोधि सोसायटीले लुम्बिनीमा गुरुयोजनाभित्र बिहार बनाएर ध्यान केन्द्र संचालन गरिरहेको छ । विदेश सचिबले बुद्ध नेपालमा नै जन्मिएका हुन् भनि ठोकुवा गरेर किन बोल्नु पर्यो ?
योगगुरु रामदेव नेपाल आउँदा खुल्लामंचमा “बुद्धका जन्म नेपाल मे हुवा था” भन्छन र तालि खान्छन, तर हरिद्धार फर्केपछि “हमारा भारत महान हैं जहाँ भगवान बुद्धका जन्म हुवा था” भनि पुस्तक लेख्छन । सुजाता सिंहले बुद्ध नेपालमा नै जन्मिएका हुन् भनि दिंदा हामी सगरमाथाको टुप्पोमा पुगेको गौरब अनुभूति गर्छौं । फलानोले आफ्नो बाबुलाई देखाएर तिमी उसैका छोरा हौ भनि दिनु पर्ने कत्रो बिडम्बना ? फलानोले भनेको म त उसैको छोरा रहेछु भनेर गौरब गर्ने ?
अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामाले गौतम बुद्ध नेपालको लुम्बिनीमा जन्मिएका थिए भनेका छन्, नेपाल र लुम्बिनीको नाम खुलेर गाँसेका छन् । बहुप्रतिभाशाली फिल्मी कलाकार अमिताभ बच्चनले “कौन बनेगा करोडपति” को प्रश्न उत्तरमा “बुद्धका जन्म इसा पूर्व ६२३ मे नेपाल के लुम्बिनी मे हुवा था” भन्दा ऐतिहासिक गौरब अनुभव हुन्छ । त्यस्तै अमेरिकाको वाशिंगटन पोस्टमा “बुद्ध वाज बोर्न इन लुम्बिनी नेपाल” भनेर लेखेका छन । भारतीयहरु हल्ला बढी गर्छन भनेर पनि व्यंग्य गरेका छन् । हो यस्तो पो हुन्छ निस्वार्थ कुरा । अरुले त ठाउँ कुठाउँ कुरा चपाएका छन् ।
पोहर साल एकजना प्रसिद्ध धर्म गुरुले बिदेशमा प्रबचन दिदा भनेका थिए, “बुद्ध संसारका कुन देशमा जन्मेका थिए भन्ने कुरा गौण हो, बुद्धका महान उपदेशको पालाना गर्नु ठुलो कुरो हो” । यति के भनेका थिए स्वाभिमानी नेपालीहरुले फेसबुक र twitar सम्म बिरोधको राँको बाले । त्यस्तै अमेरिकाको क्यालिफोर्नियास्थित आइकोन शु कम्पनीले महिला र पुरुषले लगाउने जुत्तामा बुद्धको फोटो राखेर बिज्ञापन छापे । लुम्बिनी कपिलबस्तु दिबस अभियानले अमेरिकन रास्ट्रपतिदेखि सबैतिर बिरोधको आवाज चर्काए । त्यसको पनि स्वाभिमानी नेपालीले सडकमा नारा जुलुस सहित बिरोध गरे । यता नेपालमा अमेरिकी दुताबास र प्रधानमन्त्री कार्यालयसम्म बिरोध पत्र वुझाए । सरकारको कानमा बतास लागेन । कसै कसैले राजनीति कारण गरेको होइन भन्ने बहाना गर्दै राजनीतिक ढाकछोप गरे । बिरोधलाई मत्थर पार्ने प्रयास गर्दै लुम्बिनी कपिलबस्तु दिबस अभियानले गरेको कामको जस लिन खोजे । अभियानको बिरोध पछि एक महिना अगाडी नै बन्द भएको बिज्ञापन सरकारी प्रयासमा बन्द भएको भन्नसम्म पछि परेनन् । फेसबुकबाट शुरु भएको कुरा फेसबुकबाट नै सकियो भन्दै निसंकोच जस लिन खोजे ।
भारतमा जी टिवीले बुद्ध सिरियल प्रसारण सुरु गरेपछि अर्को अनाबश्यक विवाद खडा गरेको छ । स्वाभिमानी नेपाली युवाले जुलुस सहित भारतीय दुताबासमा बिरोध जनाए । यसरि युवाहरु सचेत भएर सडकमा उत्रेकोमा प्रबुद्ध व्यक्तिहरुले स्याबासी दिए ।
पोहरसाल लुम्बिनीकै बुद्ध आदर्श विद्यालयले भारत र नेपालको सिमा जोडिएको लुम्बिनीको ककरहवा नाकामा “वेलकम टु बर्थ प्लेस अफ लोर्ड बुद्ध लुम्बिनी नेपाल” लेखिएको प्रबेस द्धार बनाउन सरकारलाई व्यंग्य गर्दै खाजाको पैसा काटेर एक रुपैया चन्दा संकलन गरे लुम्बिनी-कपिलवस्तु दिवस अभियानका बिध्यार्थी दूतहरुको आह्वानमा । यो अभियान अगाडी बढ्दै काठमाडौँका अन्य बोर्डिंग स्कुल क्याम्पस हुदैँ अस्ट्रेलियामा बस्ने नेपाली बिद्धार्थीहरुसम्मले पनि एक डलर चन्दा संकलन गरेका छन् । लुम्बिनी नाकामा प्रवेश द्धार बनाउने कुरामा कसैको कानमा बतास लागेकै छैन ।
लुम्बिनी-कपिलबस्तु दिबस अभियानले बेलायतको बिश्व प्रसिद्ध म्युजियममा बुद्धको जन्म उत्तर भारतमा भएको भनि लेखिएकोलाई सच्याउन म्युजियम अधिकारी समक्ष सामाजिक सन्जाल मार्फत दबाब दिने र अस्पस्ट रुपमा सच्याएपछि ब्रिटिश म्युजियम जस्तो बिस्व स्तरीय म्युजियमले सच्याउन गरेको प्रतिबद्धता पुरा गर्न सुझाब दिंदै स्पस्ट रुपमा सच्याउन ज्ञापनपत्र वुझाउने काम गरे । अभियानका बिस्व संयोजकको ब्रिटिश म्युजिमका सम्बन्धमा कान्तिपुरमा प्रकाशित समाचारमा बिभिन्न देशमा भएका बुद्ध जन्मस्थल बिषयमा भएका दिग्भ्रम सच्याउन सरकारले कुटनितिक नियोग मार्फत काम गर्नु पर्छ भनाइका प्रभावका कारण कोरियाका तात्कालिन राजदूतले कोरियाका रास्ट्रपति समक्ष कोरियाको पाठ्यक्रममा भएको बुद्ध जन्मस्थल बिषयमा भएको गल्ती सच्याउन गर्नु भएको आग्रह अनुरुप त्यहाँ सरकारी स्तरबाट नै सच्याउने निर्णय गरिएको छ । चीनमा पनि सच्याउन नेपाल मजदुर किसान पार्टीका बिदेश बिभाग प्रमुख प्रेम सुवालले याक एंड येतिको कार्यक्रममा चिनिया राजदुतका समक्ष सार्बजनिक माग गरेपछि चीनको उच्च पदाधिकारी समक्ष सो कुरा राखिने जानकारी दिइएको छ । बुझनेलाई यो कुरो गहिरो छ, नबुझनेलाई घर छेउमा पहिरो छ ।
फेसबुकमा बुद्धको फोटो राखेर नेपाली नागरिकता पत्र बनाएको उचित लागेन । महान बुद्धको गरिमालाई हलुका नपारौं । यथार्थ सोचौं । जहाँ बुद्ध जन्मिएका हुन त्यही लुम्बिनी नेपाल हो ।
* लेखक लुम्बिनी बौद्ध बिश्वविद्यालयका पूर्व रजिस्ट्रार तथा गोरखापत्रका पूर्व सम्पादक र लुम्बिनी-कपिलवस्तु दिवस अभियानका सार्क सल्लाहकार हुनुहुन्छ । २०७० अशोज १२ गतेको गोरखापत्रमा प्रकाशित यो लेखलाई केही परिमार्जन गरिएको छ ।
This entry was posted on January 31, 2014 at 10:13 pm	and is filed under लेख / रचना. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.